Bichar Khabar » पिँडौलाको मासु माथि जाने समस्यालेआजित हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् बच्ने उपाय
पिँडौलाको मासु माथि जाने समस्यालेआजित हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् बच्ने उपाय
16 Dec 2018 04:12:19 PM | No Comments
खुट्टा फर्किर अर्थात् खुट्टाको पिँडौलाको मासु माथि जाने समस्याले धेरै जनालाई दुःख दिने गर्दछ। खुट्टा फर्किँदा मानिसलाई असह्य पीडा हुन्छ। पिँडौला फर्कने समस्या एउटा यस्तो अवस्था हो, जसलाई पिँडौलाका मांसपेशीमा अचानक संकुचन हुन गई मांसपेशीहरु कडा हुने र दुख्ने गर्दछ।
सामान्यतयाः यो के कारणले हुने गर्छ भन्ने वैज्ञानिक कारण पत्ता लागिसकेको छैन तर मेडिकल टममा इडियोप्याथिक भन्ने गरिन्छ। यो समस्या जुनसुकै उमेर समूहका महिला वा पुरुषलाई हुन सक्छ। पिँडौला फर्किसकेपछि दुखाइ समान्यतः १० मिनेटजति रहन्छ। तर केही सेकेन्डदेखि केही घन्टासम्म रहन सक्छ। मुख्यतः पिँडौलामा यो समस्या देखिने भए पनि कहिलेकाहिं खुट्टा र तिघ्राको मांसपेशीमा समेत यस्तो समस्या देखिन्छ।मेरुदन्डसम्बन्धी समस्यहरु– ढाडमा तथा नशा च्यापिएको अवस्था,रक्तनलीमा अवरोध भई खुट्टामा रक्त सञ्चालनमा कमी हुँदा ,रगतको विभिन्न तत्वहरुको कमी जस्तैः क्याल्सियम पोटासियम,शरीरमा पानीको अभाव ,गर्भावस्था , स्नायु प्रणलीको गडबडी आदि कारणले पिडौला फर्किन्छ ।
पिँडौलामा अचानक संकुचन भई मांसपेशीहरु कडा हुने र दुख्ने गर्दछन्। यो समस्या औसत १० मिनेटजति रहन्छ। तर कुनै बेला केही सेकेन्डदेखि केही घन्टासम्म पनि हुनसक्छ। केही व्यक्तिमा दिनमै धेरै पटकसम्म यस्तो अवस्था देखिन सक्छ। पटकपटक देखिने यस्तो समस्यालाई बिरामीको दैनिक क्रियाकलापमा बाधा पर्ने र कसैकसैलाई निद्रामा समेत कठिनाइ हुनसक्छ।
धेरैजस्तो अवस्थामा यो समस्या आफैं हराएर जान्छ। तर पटकपटक समस्या देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ र यदि सुरुवाती अवस्थामा यो समस्या छ भने फिजियोथेरापीको माध्यमबाट मांसपेशी तन्काउने कसरतहरु गरी निको पार्न सकिन्छ। यसका अतिरित्र चिकित्सकबाट शारीरिक परीक्षण गराई अन्य रोगका कारण पत्ता लगाउने र जुन रोगले यो समस्या भएको हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। यदि कसरतले मात्र ठिक भएन भने चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।